Xareynta Ergada Dooraneysa Xildhibaanada Golaha Shacabka oo laga shiray | Dayniile.com
Home Warkii Xareynta Ergada Dooraneysa Xildhibaanada Golaha Shacabka oo laga shiray
Xareynta Ergada Dooraneysa Xildhibaanada Golaha Shacabka oo laga shiray
Magaalada Muqdisho waxaa sadexdii maalin ee lasoo dhaafay ka socday shir ay lahaayeen Guddiga Doorashada Heer Federaal iyo guddiga Doorashada Heer Dowlad goboleed , shirkan ayaana looga arinsanayay dhameestirka doorashada.
Guddiga Doorashada Heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa shirkooda diirada ku saaray sidii loo guda gali lahaa doorashada Xildhibaanada Aqalka Hoose gaar ahaan xareynta ergada Dooraneysa Xildhibaanada.
Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Heer federaal ayaana kula dar daarmay xubnha kale ee guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay u diyara garoobaan qabashada doorashada Aqalka Hoose iyo xareynta ergada dooraneysa Xildhibaanada.
Doorashada Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa hada mareysa heer gabo gabo ah, waxaana wali muuqan diyaar garow ku aadan qabashada doorashada Aqalka Hoose oo ugu horeyso in marka hore la xareeyo Odayaasha iyo Ergada Xildhibaanada dooraranaya.
Previous articleCaawa Magaalada Guriceyl oo aloow sahal ah iyo Odoyaasha CEYR oo war lid ku qh Sheikh Shaakiir soo saaray
Next articleMuwaadin u dhashay waddanka Britain oo ka sheekeeyay sida uu been ugu sheegay dagaalyahannada Taalibaan
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabatay munaasabad lagu xusayey Maalinta Cunnada Adduunka iyo Maalinta Beeraleyda Soomaaliyeed Mas’uuliyiinta ka tirsan Wasaaradda Beeraha iyo...